Socdaalkii taariikhiga ahaa ayaan nasiib u yeeshay in aan ka qayb galo Allaa wayn ninkii aaminaa awood leh | Codkamudug.com	Home
Saturday, September 1st, 2012 | Posted by admin Socdaalkii taariikhiga ahaa ayaan nasiib u yeeshay in aan ka qayb galo Allaa wayn ninkii aaminaa awood leh
Socdaalkii taariikhiga ahaa ayaan nasiib u yeeshay in aan ka qayb galo Allaa wayn ninkii aaminaa awood leh
Waxay ahay 22/08/12 07:00 aroor nimo markaan ka amba baxnay Magaalada Gaalkacy. waxaan ku baxnay wadadda qorax kasoo bax kaxigta Magaalada Gaalkacyo. waxaan ka koobnayn: Madaxwayne Cabdi Xasan Cawaale, Gole Wasiiro, Golaha dhaqanka, golaha baarlamaanka, ururka dhalinyarada, haween iyo aqoon yahano.
Ujeedada Socdaalku wuxuu ahaa in lasoo ogaado tirada dadka, baaxadda deegaanka, dhirirka magaalo ilaa magaalo intay isku jiraan, baahida iyo horumarka deegaanka sida: Caafimaadka, waxbarashada, Biyaha, Beeraha, nabaadguurka, aminga IWM.
Waxaan soo aragnay oo aan marqaati kasoo noqday dad iyo deegaan aad u baaxadwayn isla markaana daacad u ahaa maamulka cusub ee ladoortay socdaalkaa oo ahaa wajigii koowaad ayaa wuxuu kusoo gaban gaboobay farxad iyo guul.
Waxyaabaha laga xusi karo ee aan socdaalkaas kusoo baranay ayaa waxaa kamid ahaa dad aan waligood dowlad arkin islamarkaan ay taariikhi u ahayd in ay arkaan madaxwayne, waxaa kaloo layaab ahay in ay dadku galeen tartan magaaleed ku salaysnaa anagaa magaalo heblo ka fiicnaaanayna iyo anagaa ka mudan in aan madaxtooyo dhisano Dowladana marti galino.
waxaa booskii kabaxay jufaysigii iskuna badaly magaalaysi, waxaa hadda tartan ku jira ilaa 5 magaalo oo ku kala hor maraya in ay dhisaan madaxtooyo.
safarkeenu wuxuu kabilowday Magaalada Qarqoora waxaa qaas u ahaa in ay Madaxwaynaha kacodsadaan in uu furo oo xariga ka jaro School Cusub oo ay dhiseen qaar kamid ah Jaaliyadda Dibadda.
waxaaa ku xigay Bitaale waxaa ka dhacay soo dhwayn wanaagsan waa meel caan ku ah Barashada Diinta waxay kaloo aad ugu fiican tahay dhaqashada xoolaha.
waxaa ku xigay Jilable waxaa dagan dad farabadan soo dhawayn heer sare ah ayay sameeyeen waxay qireen in aysan waligood dowlad arkin. Dhuure ayaa nasiib u yeeshay oo ku xigay waxaa kajira maamul ka amni badan dhulka intiisa kale, waa meel Sigaarka, Qaadka, Qamriga iyo gabar iyo wiil ajnabi kala ah ay mamnuuc ka yihiin, waxaa hada kahor dhacday in wiil iyo gabar ay meel wada istaageen Xukun kadib meeshii ayaa qabri laga qoday waana qiso Galmudug caan ka ah, waxaa arinkaas suurta galiyay shiikha caanka ah Macalin Quraan’ku’adag.
safarkeena oo sii socday ayaa waxaan u hoyanay Xingod oo loo baxshay Balicaano soo dhawayn qaali ah kadib waa meel dad badan islamarkaana ay daganyihiin culumo badan waxbarashona kajirto sifiican ayayna u marti sooreen wafdigii maamul adag ayaana u dhisnaa.
Bud Bud ayaa ku xigtay waxaana kajira waxbarasho wanaagsan quraac iyo soo dhawayn wayn ayay diyaariyeen wax barashadu heer sare ay ahayd. Waxaa kajiray Bus aad u tirabadan oo waxaa dhacaysay dabaylo ciid wata waxaana
lagu waaniyay in ay magaalada geedo ku beeraan si ciida looga hortago.
Afbarwaaqo ayaa kusii xigtay Geel ayaa laqalay maalinkaas oo wafdiga qado looga dhigay, waxaa bur buriyay magaalada colaado soo noq noqday inyar ayaana magaalada kadhisan.
Maaalintii 24aad waxaan u hoyanay meel u dhow Hobyo subixii ayaa waxaa ka dhacay Hobyo soodhawayn wacdaro wadatay waxaana soo baxay dad aad u farabadan oo watay calamo, labisnaana dharka nuucyadiisa kala duwan. Hobyo waxaan joognay maalmo waxaana xal loo raadinayay Amni daro laga sheegayay magaalada waxaana lasoo kormeeray dhamaan xarumaha Dowladda, Dekadda iyo Airport ga, iydoo Burcad oo dhan laga xaaraan tinimeeyay deegaanka Galmudug taas
Gawaan oo ah magaalo aad u fiday 5tii sano oo lasoo dhaafay ayaa waxaan kala kulanay soo dhawayn finanwaa ah waxayna dadku safaf dheer dheer ugu jireen soo dhawaynta, waxaan aad ula yaabnay dadka oo aad u fara badnaa waxayna diyaariyeen Casho wanaagsan wax barashadu way wanaag sanayd yina.
Subixii waxaan booqanay magaalada Qaranrow, waa magaalo ku taala meel dhul beereedka ku wanaagsan waxaana ku yaalay beero wallow uu waqtigaani yahay waqti abaar ah waxaase la arkayaa ooda beeraha waawayn.
Wacdarihii ku xigay waxay ka dheceen magaalada qadiimka ah ee Wisil waxaan isleeyahay waa magaalada ugu dadka badan waa magaalo dhirbadani ku taalo taa ayaana keentay in aad u qurxoonaato waxaa ku badnaa xamaasadda iyo calamada, labiska Dharka lagu xardhay Galmudug waxayna diyaariyeen quraac wanaagsan. Waxaa dagan magaalada dad aan ku qiyaasnay tomanaan kun oo qof.
Shiikha caanka ah ee sheikh Xasan Naaleeye ayaa magaalada kadhisay Isbitaal wayn waxaana daawada loogu kaydiyaa Gobolka Mudug iyo qayb kamid ah Galgaduud asagaana ku deeqay sheikh xasan waa nin can ku ah xarumaha Caafimaadka iyo goobaha waxbarashada uguna deeqa dadka, wuxuu dhisay goobo aad u farabadan kuwasoo waqaf wada ah
Waxaan u Socdaalnay Magaalada caanka ku ah Cusbada oo liyiraahdi Bacaadwayn waxaa halkaasi nagu soo dhaweeyay dadwayne iyo Ciidan aad u taba baran kuna labisnaa dharka booliska waa magaalo isku filnaasho badan gaartay waxay samaysteen Ciidamo ay iyagu maal galiyeen, school, Isbitaalo iyo beeraba hay’aduhuna wax wayn uma qaban, waxayna go’aansadeen isku tashi. Hilib Geel iyo goosaartiis ay qado nooga dhigeen. Sidoo kale magaalada waxay cadeeyeen in aysan waligood Dowlad arkin sida kuwa kaleba. Reer Bacaadwayn waxay kaloo sameeyeen meelaha Qudbadaha loogu talo galay oo ay gacantooda ku sameeyeen waxayna ku xardheen calanka Soomaaliya. Wafdigu hameenkii waxay dib ugu soo laabteen magaalada Wisil waxayna subixii katageen ayadoo Geel kale u xiran yahay kasoo ay ugu talo galeen martida
Magaalada Xeero dhagaxlay oo iyana caan ku ah wax soosaarka beeraha ayaa waxay sameeyeen Quraac lagu shubay take away tasoo lagu xasuusto Xeero dhagaxlay, waxaa kaloo lagu xasuustaa Beeraha ugu badan dhulka Galmudug oo kabaxa waxayna wafdiga hadiyad usoo siiyeen Liin Dhaanaan iyo Basbaas
Waxaana halkaas lagu mamnuucay in aan dhuxul dambe lajarin loona bixiyay Burcad geedeed. Waxaa ku xigay magaalada Ceeldibir oo ah magaalo aad u horumartay waxay saldig u ahaan jirtay shiikhii waynaa ee Shiikh Axmed Suufi kuna duugan waa magaalo kaduwan magaalooyinka kale waxay leedahay wadooyin waawayn siwanaagsan ayaana loo cabiray. Waxaan orankaraa waa magalada labaad ee daku ku badan yihiin intii aan soo marnay Geel iyo ariba waa qaleen oo qado ayay ahayd, maamul wanaagsan ayaana u dhisnaa. Waxay leedahay Isbitaalo iyo school.
Xaaro ayaan ku hoyanay waxay muujiyeen soo dhawayn iyagoo qalay xoolo badan waxay nagu soo dhaweeyeen dikri salaam iyo nabi amaan oo qadar daqiiqado ah loo taagnaa dadku aad ay u jeclaysteen.
Subixii ayaan nimid Ceelguula oo ah magaalada aqoonta Galmudug waxay safafdheer dheer waxayna soo safeen dhalinyaradii kabaxday jaamacadaha, kuwii dhiganayay Dugsiga Sare iyo Dusiga Dhexe. Ceelguula waxay soo safeen Ciidan Booliis ah oo labisan, uma korin sida magaalooyinka kale balse waxay leedahay Schoolo iyo Isbitaalo waan magalada kaliye ee Dugsiga sare leh marka lagareebo Gaalkacyo. Waxaa kaloo lagu xasuustaa in Golayaasha socday ay mid walba qolkii ay ku cuntayn lahaayeen ay magic ugu dhajiyeen taasoo noqotay cajiib
Bajeela ayaan usii gudubnay waxaana soo dhawyn kadib ka ba banayay oo magaalada dhexdeeda bit dheer dul heehaabayay Calanka Soomaaliya waxayna kortay magaaladu 60% shantii sano ee lasoo dhaafay, waxay kaloo can ku nodeen wadadii lagu baxayay ayay dadbadan sii safeen oo sagootiyay wafdiga.
Qaydaro ayaa ku xigtay runtii way ilmeeyeen reer Qaydaro waxayna yiraahdeen ma aanaan malaysanayn in naloo imaanayo maalmo badan ayaana idinsugaynay iyagoo wafdiga uga horyimid meel fag duco iyo damaashaadna ku dhamaystay soo dhawayntooda.
Galbarwaaqo ayaan soo aadnay waxayna wadiga kusoo dhaweeyeen Hidaha iyo dhaqanka waxayna u keeneen rati raran oo dhar iyo heeryo lagu soo xardhay waxaana waday nin watay gaashan iyo waran, waxay kaloo goobta ku xardheen Hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya. Waxay soo kireeyeen koox fanaaniin ah halkaasi riwaad kadhigay. Reer Galbarwaaqo waxay hameenkii sameeyeen Cashadii ugu wanaagsanay, reer Galbarwaaqo waxay sidoo kale balanqaadeen in ay dhisayaan madaxtooyadii hadii loo balan qaado Caasimad.
Dawgaab ayaa waxaa wafdiga lagusoo dhaweeyay nabi ammaan waxaana lagu xasuusan karaa in ay yiraahdeen magaaladaani waa magaalo diinta lagu barto waxaana idiin hibaynay sade x Gabdhood oo akhlaaq iyo diin ku koray.
Wargalo ayaa hayd ayana magaalo kortay waxayna ka faaiidaysteen magaalooyinkii kale waxayna muujiyeen waxyaabo layaable oo ay kamid ahaayeen in ay sawaxan kusoo dhaweeyeen wafdiga kuna sii sagootiyeen waxay ku sharaxeen miisas dheer dheer Qudaar nuuc nuuc ah waxay leeyihiin maamul, school iyo isbitaal intaba waxay sameeyeen Quraac casri ah oo u badnayd Qudaar iyo Miro.
Docol ayaa noqotay magaaladii ugu dambaysay wajigii koowaad ee safarka waxaana lasameeyay soo dhawayn lamid ah kuwii hore waxayna kamid tahay magaalooyinka tartanka ugu jira caasimadda. Waxaana kajira maamul xoog leh.
Wafdigu wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Gaalkacyo wuxuuna soo maray farsa magaalaha wadooyinka ugu waawayn waxaana lagusoo dhaweeay sawaxan iyo sacab. Waxaan layimid garoonka Cabdulaahi ciisi oo ay ku sugayeen kumanaan dad ah oo sugayay warbixinta wafdiga.
Iskusoo wada duuboo wuxuu safarkaasi ahaa mi taariikhi ah oo aan horay uga dhicin deegaanka Galmudug waxaana lagusoo bartay dad iyo deegaan barwaaqo ah. W axaan Goor dhow idiin soo gudbin doonaa Baaxadda dhulka iyo warbixino muuqaal ah Inshaa Allah.
Wixii aan katagay ama aan ku kordhiyay ama xanaf iyo amaan saa’id ahba waan ka cudur daaranayaa waxa aan qorayna waa aragti qalad iyo saxba yeelan karta
C/qaadir Cali Jaamac (Qalabxoor)